အဲရစ်ဆင်ကိုသာ ခေါ်ယူလိ်ုက်မယ်ဆိုရင် ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကထက် ပိုဆိုးသွားမယ်လို့ မန်ယူနိုက်တက်ကို သတိပေးလိုက်တဲ့ မာဖီ - xyznews.co
အဲရစ်ဆင်ကိုသာ ခေါ်ယူလိ်ုက်မယ်ဆိုရင် ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကထက် ပိုဆိုးသွားမယ်လို့ မန်ယူနိုက်တက်ကို သတိပေးလိုက်တဲ့ မာဖီ
လီဗာပူး ကွင်းလယ်လူဟောင်း ဒန်နီမာဖီက ခရစ်ရှန်အဲရစ်ဆင်ကိုသာ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တို့ ခေါ်ယူလိုက်မယ် ဆိုရင် ဒါဟာ ထူးဆန်းတဲ့ ကစားသမား ခေါ်ယူမှု တစ်ခု ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ ဆိုလိုက်ပါတယ်။
မာဖီက မန်ယူနိုက်တက်သာ အဲရစ်ဆင်ကို ကွင်းလယ်ပိုင်းမှာ ဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ် နဲ့ တွဲဖက် ကစားစေခဲ့မယ် ဆိုရင် ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီကထက် ပိုမို အခြေအနေ ဆိုးသွားလိမ့်မယ်လို့ the Red Devils တို့ကို သတိပေးခဲ့ပါတယ်။
ယူနိုက်တက်ဟာ လက်ရှိမှာ ဒိန်းမတ်စတားကို ခေါ်ယူနိုင်ဖို့ အခြေအနေ အကောင်းဆုံး ဖြစ်နေပြီး အဲရစ်ဆင်ဟာ ဘရန့်ဖို့ဒ် နဲ့ တော့တင်ဟမ် တို့ကို လျစ်လျူရှုကာ အိုးထရပ်ဖို့ဒ်ကို ပြောင်းလာဖို့ များနေပါတယ်။
အဲရစ်ဆင်ဟာ ဘောလုံးလောကကို ပြန်လာဖို့ အတွက် လုပ်ဆောင်နေချိန် အိုင်ယက်အရန်အသင်းနဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းဆင်းနေစဉ် ယူနိုက်တက် မန်နေဂျာသစ် ဖြစ်တဲ့ အဲရစ်တန်းဟတ်နဲ့ အလုပ်လုပ်ဖူးခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။
တန်းဟတ်ကလည်း ဘာစီလိုနာ ကွင်းလယ်လူ ဖရန်ကီဒီဂျောင်း အပြင် အဲရစ်ဆင်ကိုပါ ခေါ်ယူဖို့ စိတ်အားထက်သန်နေတာ ဖြစ်ပြီး မာဖီကတော့ တန်းဟတ် အနေနဲ့ ဘာကြောင့်များ ဒီကစားသမား ၂ ဦးကို လိုချင်နေတာလဲ ဆိုတာ မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။
တော့တင်ဟမ် ကြယ်ပွင့်ဟောင်းက အဲရစ်ဆင် အနေနဲ့ ပုံမှန်ပွဲကစားခွင့် ရဖို့ အတွက် အာမခံချက် ပေးနိုင်တဲ့ အသင်းကိုသာ သွားကစားရန် တိုက်တွန်းလိုက်ပြီး ယူနိုက်တက်ရဲ့ ပွဲထွက် ၁၁ ယောက်မှာ အံ၀င်ပမလားဆိုတာ မရေမရာ ဖြစ်မိတယ်လို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်။
မာဖီက “မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် ရဲ့ အစီအစဉ်ကို ကြည့်လိုက်မယ် ဆိုရင် ကျွန်တော် နားမလည်နိုင်အောင် ဖြစ်မိပါတယ်။ အကယ်၍ အဲရစ်တန်းဟတ် အနေနဲ့ ယူနိုက်တက်ရဲ့ ကွင်းလယ်ပိုင်းမှာ ကွင်းလယ်ခံစစ် ကစားသမား ၁ ဦးနဲ့ အတူ အဲရစ်ဆင် ဖာနန်ဒက်စ် တို့ကို တွဲကစားခိုင်းလိ်ုက်မယ် ဆိုရင် သူတို့ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီကထက် ပိုဆိုးတဲ့ အဆင့်မှာ အဆုံးသတ်သွား ပါလိမ့်မယ်။
တန်းဟတ် အနေနဲ့ ဖာနန်ဒက်စ်ရဲ့ back-up တစ်ဦး အဖြစ် အဲရစ်ဆင်ကို ခေါ်ယူချင်တာလား ဒါမှမဟုတ် အဲရစ်ဆင်ကို ကွင်းလယ်ဗဟိုမှာ ကစားစေဖို့ အတွက် ခေါ်ယူချင်တာလား? အကယ်၍ သူတို့ ဒီဂျောင်းနဲ့ အဲရစ်ဆင် တို့ကို ခေါ်ယူသွားခဲ့မယ် ဆိုရင်…ခံစစ်ကို ကူနိုင်တဲ့ လုပ်အားက ဘယ်မှာလဲ? ဘယ်သူက ကျားကုတ်ကျားခဲ ကစားသွားမှာလဲ? ပြိုင်ဘက်ရဲ့ တိုက်စစ်လမ်းကြောင်းတွေကို ဘယ်သူက ဒိုင်ခံဖျက်ပေးမှာလဲ? Physical presence က ဘယ်မှာလဲ? ဒီလို ကစားသမားတွေ မရှိပါဘူး။
အဲရစ်ဆင်ကို လိုချင်တဲ့ မန်ယူနိုက်တက်ရဲ့ စဉ်းစားမှုဟာ ထူးဆန်းပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ နားမလည်နိုင်ပါဘူး။ သူတို့မှာ လုံလောက်တဲ့ ဖန်တီးရှင်တွေ တိုက်စစ်ကစားသမားတွေ ရှိနေပြီးသားပါ။” လို့ ဆိုလိုက်ပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး မာဖီက “အကယ်၍ ကိုယ်သာ အဲရစ်ဆင်ရဲ့ နေရာမှာ ဆိုရင် ကစားသမား ဘ၀ရဲ့ ဒီလို အဆင့်မှာ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် အတွက် ကစားခွင့် ရမယ့် အခွင့်အရေးကို ဆုပ်ကိုင်မိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီနွေရာသီမှာ အဲရစ်ဆင် အတွက် ဘယ်အရာက ဆွဲဆောင်မှု အရှိဆုံး ရွေးချယ်မှု ဖြစ်သင့်သလဲ? ဘယ်နေရာက ပွဲကစားခွင့် အများဆုံး ပေးနိုင်တဲ့ အပေါ် မူတည်ပြီး ဆုံးဖြတ်ရမှာပါ။”
Previous Article နည်းပြဖြစ်လာတဲ့ တိဗက်ကြီး ၊ လူခေါ်ကြမ်းနေတဲ့ နစ္စတယ်ရွိုင်း ၊ အဲရစ်ဆင် ကို နောက်ဆုတ်လိုက်တဲ့ စပါး ၊ ရီးရဲနောက်ခံလူကို စုံစမ်းလာတဲ့ ရိုးမား တို့နဲ . . . ယနေ့အတွက် နောက်ဆုံးရ အားကစား သတင်းများ
Next Article အောင်မြင်စွာအဆုံးသတ်သွားတဲ့ လူကာကူရဲ့ ဇာတ်လမ်း ၊ ဘယ်သူမှ မလိုချင်တဲ့ အန်တိုနီ ၊ ခပ်သွက်သွက် ခပ်များများတွေ့လာရတဲ့ အပြောင်းအရွှေ့တွေနဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ